Global Voices teny Malagasy » Eo Ambany Fahefan’ny Biraon’ny Mpanara-maso ny Hetra, Tafakatra Avo Noho izay Nisy Hatrizay Ny Fandàvan’ny Mponin’i Puerto Rico Tsy Hifidy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Desambra 2016 18:26 GMT 1	 · Mpanoratra Ángel Carrión Nandika Candy
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Pôrtô Rikô (Etazonia), Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika
Mivaky toy izao ilay fanoharana: “Aza adino ny mifidy,” fa mampiasa kilalaon-teny iray. Raha ny mahazatra, “ny mifidy (vote)” dia tokony ho voasoratra amin'ny “v” fa eto amin'ity tranga ity nanapa- kevitra ny mpanakanto ny hanoratra azy io amin'ny fampiasana ny “b,” izay manova ny heviny ho lasa “manary [ fako].” Ny mena sy manga dia maneho ny lokon'ireo antoko politika roa lehibe indrindra ao Puerto Rico, mena ho an'ny Antokom-Bahoaka Demokraty (PDP) ary manga ho an'ny Antoko Vaovao Liam-Pivoarana (NPP). Sary avy amin'i Kike Estrada sy nalaina tao amin'ny planetakike.com . Nahazoana alalana.
Lafiny iray hafa mahaliana dia ny hoe nandresy tamin'ny fifidianana i Ricardo Rosselló  , tamin'ny vato 655.626 monja, na 41,76%. Io isa io no matetika ampiasaina rehefa mifanakalo hevitra momba ny hatraiza ny fandresen'ny kandidà iray tamin'ny fifidianana. Tadidio fa misy mponina 3.5 tapitrisa any Puerto Rido, izay manodidina ny 2.9 tapitrisa no voasoratra anarana hifidy. Midika izany fa ny governora dia voafidin'ny olona vitsy kely maherin'ny 22% eo ho eo tamin'ireo mpifidy voasoratra anarana, na eo ho eo amin'ny 19% ny mponina eo. Inty no fotoana voalohany nisianà governora voafidy tamin'ny isa faran'izay ambany.
Iray amin'ireo teoria fototra ho an'ilay fandàvana tsy hifidy niely patrana koa dia satria fifidianana voalohany nokararakarain'ny birao fanaraha-maso ny hetra , napetraky ny PROMESA, Lalànan'ny Fanarahamaso, ny Fitantanana ary ny Fahamarinantoerana ao Puerto Rico ireo. Ahitana mpikambana fito tsy nofidiana, ny biraon'ny fanarahamaso ny hetra dia natsangan'ny Kongresy Amerikana miaraka amin'ny fanohanan'ny antoko roa ary manana fahefana izay tsy miraharaha ny lalàm-panorenann'i Puerto R⁫ico efa voafetra sahady. Mba hiresahana ny trosan'ireo vondronosy, mitentina 72 lavitrisa dolara, ny Kongresy ihany no valian'ny birao fa tsy ny vahoakan'i Porto Rico.
Angel Israel Rivera, mpampianatra siansa politika ao amin'ny anjerimanontolon'i Porto Rico, manoratra ao amin'ny gazetiboky nomerika 80 Grados, niantso ny fanavaozana ny rafi-pifidianana ao  Porto Rico::
Manoratra ihany koa ho an'ny 80 Grados, nanana izao holazaina ny mpanao gazety, Manuel Martínez Maldonado , iray andro mialoha ny fifidianana:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/01/92260/
 Vaomieran'ny Fanjakana miandraikitra ny Fifidianana : http://elecciones2016.ceepur.org/#es/default/GOBERNADOR_Resumen.xml
 birao fanaraha-maso ny hetra: https://globalvoices.org/2016/09/11/puerto-ricanss-struggle-against-us-imposed-austerity-is-heating-up/
 niantso ny fanavaozana ny rafi-pifidianana ao: http://www.80grados.net/pandemonium-electoral-en-puerto-rico-2016/